कुन अवसरमा कुन ह्विस्की पिउने?-उद्योग समाचार-गोआलोङ रक्सी (समूह)
कुन अवसरमा कुन व्हिस्की पिउने?
विभिन्न अवसरहरूको लागि सही व्हिस्की कसरी छनौट गर्ने?
व्हिस्कीको मजा लिने समय र अवसरले निश्चित रूपमा व्हिस्कीको लागि तपाईंको इच्छालाई असर गर्नेछ। यहाँ केही साधारण अनुमानहरू छन्। र म व्हिस्की छनौट गर्नका लागि केही आधारभूत सिद्धान्तहरू सिफारिस गर्नेछु।
1. नाइट क्लब पार्टी
यहाँ स्कटिश एकल माल्ट व्हिस्की बर्बाद नगर्नुहोस्। केन्टकी बोर्बोन व्हिस्की वा स्कटिश मिश्रित व्हिस्की छनोट गर्नु राम्रो हुन्छ, यसलाई आइस क्यूब्ससँग पिउनुहोस्। यस परिदृश्यमा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मूल्य हो, ब्रान्ड होइन। किनभने तपाईं मानिसहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहुनेछ, तपाईंको वरपरका चीजहरू। तपाईंले आफ्नो हातमा व्हिस्की गिलासबाट सुगन्धलाई बेवास्ता गर्नुहुनेछ।
2. शिल्प कौशल देखाउन एक गिलास ककटेल बनाउनुहोस्
ककटेल मिश्रण गर्न सस्तो व्हिस्की कहिल्यै नछोड्नुहोस्। खराब कच्चा मालको पाठ्यक्रम पेय बनाइएको भयानक हुनेछ। र ककटेल मिश्रण गर्न केवल एक बोतल व्हिस्की मिलाउनुहोस्। धेरै भारी पीट स्वादको साथ व्हिस्कीले पक्कै पनि अन्य सहायक अभिनेताहरूको भव्यता चोर्नेछ, र धेरै मीठो स्वाद व्हिस्कीले स्वादको सन्तुलन गुमाउनेछ। तपाईं स्कटिश वा जापानी मिश्रित व्हिस्की, अमेरिकी निर्माताको मार्क व्हिस्की, वा अमेरिकी राई व्हिस्की प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ती सबै व्हिस्कीको बजेट मात्र 30-40 यूरो प्रति बोतल छ।
3. काम छोडे पछि एक पेय लिनुहोस्
प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नै मनपर्ने व्हिस्की हुन्छ, तर उपभोक्ता बजार विस्तार हुँदा, छनोट विविध हुन्छ। विशेष गरी जब तपाइँको मनपर्ने व्हिस्कीको मूल्य बढ्छ, तपाइँ केवल तपाइँलाई सूट गर्ने अर्को छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। यस समस्याको दुई समाधानहरू छन्:
1. बरफको साथ बोर्बोन व्हिस्कीको बोतल
2. स्कटिश नन एजेड व्हिस्की (NAS) को एक बोतल
अर्को: व्हिस्की कसरी स्वाद गर्ने